Semrush Inowedzera Anokwikwidza Bhadhara Pa Kubaya Kuongorora | Martech Zone
Chitatu, July 24, 2013 Chitatu, July 24, 2013 Douglas Karr
Isu tanga tiri mafeni uye takabatana Semrushkwemakore mazhinji ikozvino. Ivo vanoramba vachisimudzira zvavanopa uye nekuwedzera yavo data yekubata kugona, vachipa inoshamisa nzwisiso kune edu vatengi 'ekutsvaga injini kuoneka. Munguva pfupi yapfuura, Semrush zvakawedzera yavo Bhadhara Per Click kurondedzera - ichipa mufananidzo wakajeka uye nhoroondo yemakambani auri kukwikwidza nawo pane yakabhadharwa yekutsvaga injini yekushambadzira.
Heano akakosha maficha eakagadziridzwa Adsense kuzivisa:
Adsense General Maitiro - Izvi zvinokubatsira kuti uone kana vakwikwidzi vako vari kushandisa Adsense kana kwete uye zvinopa kunzwisisa kwechiitiko chavo chekare.
Rudzi rwevakwikwidzi veAds varikushandisa - Iyo chati chati inounza ku-a-glance dhata nezve maAdd makwikwi ako ari kushandisa zvakanyanya. Nekudzvanya parudzi rumwe rweAdhi iwe unozotumirwa pane yakazara mushumo.
Chinyorwa cheDomains uko Ads anodhindwa - Bhurawuza mawebhusaiti ayo makwikwi ako ari kushandisa kusimudzira yavo Adsense Unogona kuona mushumo wakadzama nenhamba yeAds inoratidzwa pane yega yega webhusaiti.
Wongorora Makwikwi 'Ad Mavara - Dzidza kuti ndeapi magwaro ari kukwikwidzwa nevari kukwikwidza muAdsense, kuba maitiro akanakisa, uye kuagadzirisa kumisangano yako yeramangwana.
Ongorora Makwikwi Midhiya - Iye zvino unogona kunyatsoziva kuti ndeipi mhando yemidhiya yaunoshandisa vanokwikwidza uye iwe unogona kuona kuti ndezvipi zvigadzirwa zviri kushambadzwa pamabhanhire avo.
Ongorora Makwikwi Ekumhara Mapeji - Dzidza zvakawanda nezve makwikwi 'ekumhara mapeji kuti uwedzere yako Adsense kugona. In Semrush, iwe zvakare unokwanisa kugona kuona izvo zvinonyanya kufarirwa.
Tags: kukwikwidzana kushambadzakukwikwidzana kuongororatsvaga vakwikwidzi vepcpamapejiakabhadhara ekutsvaga kushambadziraakabhadhara zvinyorwa zvemashokoppc yemakwikwi adsppc anokwikwidza kumhara mapejivakwikwidzi vepcppc kuzivisazvinyorwa zvemashoko